कृष्णभीरमा सेना मा’र्ने पूर्व माओवादी लडाकु यसरी बने जर्नेल, सेनापति बन्लान् ? « Etajakhabar
कृष्णभीरमा सेना मा’र्ने पूर्व माओवादी लडाकु यसरी बने जर्नेल, सेनापति बन्लान् ?
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७६, शनिबार ११:४९
माओवादी जनयुद्धमा एउटा ग’म्भीर घटना घटेको थियो । धादिङको कृष्णभीरमा सेनालाई एम्बुस थापेर बि ष्फोट गराइयो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा सेना मा रिए । उक्त घटनाको दृश्य नेपाल वान टेलिभिजनमा प्रसारण भयो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चामा आएको घटनाका कमाण्डर थिए यमबहादुर अधिकारी । पूर्व लडाकु कमाण्डर अधिकारी सेना समायोजनका क्रममा उपसेनानी बनाइए । उनलाई महासेनानी बन्न समय लागेन । सेनााका धेरै होनाहार अधिकृतलाई पछि पार्दै कर्णेल बनेका उनले फेरि फड्को मारेका छन् ।
नेकपा सरकारले अधिकारीलाई विशेष पद सृजना गरेर जर्नेलमा बढुवा गरेको छ । सहाकरथीमा बढुवाको निर्णय भएपछि उनी चार वर्ष उक्त पदमा रहनेछन् । यसले उनलाई अझ अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कुनैबेला सेना मा र्ने पूर्व माओवादी लडाकु कमाण्डर अहिले त्यही सेनाको जर्नेल बनेका छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले उनलाई उच्च पदमा पुर्याएको छ ।
विगतमा सशस्त्र गतिविधिमा लागेर समायोजनका क्रममा प्रहरीमा प्रवेश गरेकाहरु आइजीपी सम्म भएको उदाहरण छ । माओवादीबाट सेना समायोजनका क्रममा सहायकरथीमा बढुवा भएका यमबहादुर अधिकारी कुन पदसम्म पुग्ने हुन् ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । रिपोटर्स नेपाल